रचना रिमालले जीवनको पहिलो अवार्ड पाएकी छिन् हार्दिक बधाई तथा शुभकामना – Dainik Samchar
March 19, 2021 165
रचना रिमाल अहिलेकी नाम चलेकी गायिका भित्र पर्छिन्। थुप्रै चर्चित गीतमा उनको स्वर छ। स्वरको जादूबाट नै उनी धेरैको मन पर्ने गायिका बन्न सफल भएकी छिन्।उनले गाएका गीत ‘फोटो फिरिममा’ निकै हिट भयो। त्यही गीतबाट उनको नाम पनि चर्चामा आयो। त्यही गीतबाट उनले जीवनकै पहिलो अवार्ड पाएकी छिन्। रचना दएशक स्रोताले अर्गानिक स्वर भएकी गायिका पनि भन्न रुचाउछन
मीठो स्वरकी धनी रचनाले नेपाल आइडल सिजन–३ मा भाग लिएर आफ्नो नयाँ परिचय बनाएकी थिइन्। अन्तिम आठसम्म पुग्न सफल उनले तीनपटकसम्म सबभन्दा धेरै भोट पाउने गायिका बनेकी थिइन्। ‘फोटो फिरिममा’ गीतबाट उनले नेशनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्ड पाएकी हुन्। जीवनकै पहिलो अवार्ड पाउँदा उनी निकै खुशी भएकी छिन्।“लाखौँ दर्शक स्रोताको मायाकै कारण आज जीवनको पहिलो अवार्ड पाए। म एकदमै खुशी छु,” रचनाले भनिन्।
रचना रिमाल फेसबुक पोस्ट
हजुरहरुकै माया र साथले आज मैले ‘फोटो फिरिममा’ गीतबाट जीवनकै पहिलो अवार्ड प्राप्त गरेकी छु । ???
यस खुशीको क्षणमा म ‘फोटो फिरिममा’ गीतका रचनाकार, सँगीतकार तथा कलाकार दादा शिशिर भण्डारी र सम्पुर्ण टिमलाई सम्झन चाहन्छु । साथै ‘नेशनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्ड’ को आयोकज र निर्णायक ज्युहरु प्रति आभारी छु । बिशेष आभारी, देश तथा बिदेशमा रहनु भएका मेरा सम्पुर्ण शभचिन्तकहरु प्रति । हजुरहरुको माया र साथ रहिरहोस ।??
शिशिर भण्डारीको शब्द संगीत रहेको उक्त गीतले अहिलेसम्म एक करोड १८ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ।लकडाउनको समयमा थुप्रै गीत रेकर्ड गरेकी रचना पछिल्लो समयकी व्यस्त गायिका हुन्। सामान्य परिवारकी उनी केही समयअगाडिसम्म चटपटे बेच्ने गायिकाको रूपमा समेत चिनिने गरेकी थिइन्।
मीठो स्वरकी धनी रचनाले नेपाल आइडल सिजन–३ मा भाग लिएर आफ्नो नयाँ परिचय बनाएकी थिइन्। अन्तिम आठसम्म पुग्न सफल उनले तीनपटकसम्म सबभन्दा धेरै भोट पाउने गायिका बनेकी थिइन्। नेपाल आइडलको टप ८ बाट बाहिरिएपछि भने उनको गायन क्षेत्रले फड्को मारेको थियो।
Prevभारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थाल्यो
Nextचाल्नाखेलमा भेटिएका दुवै श व विद्यार्थीका, घटनास्थल नजिकै भेटियो यस्ता चिज
आज ५ भदौ २०७८, शनिवार : आजको राशिफल